कस्ता ब्यक्तिले गर्न सक्छन बलात्कार ? बलात्कारका घटना हुनुको मनोबैज्ञानिक कारणहरु यस्ता छन ! – Satabdi News
होमपेज / विचार / कस्ता ब्यक्तिले गर्न सक्छन बलात्कार ? बलात्कारका घटना हुनुको मनोबैज्ञानिक कारणहरु यस्ता छन !
कस्ता ब्यक्तिले गर्न सक्छन बलात्कार ? बलात्कारका घटना हुनुको मनोबैज्ञानिक कारणहरु यस्ता छन !
आइतबार, असोज १८, २०७७ , शताब्दी न्युज
पछिल्लो समय हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता अघन्य अपराधका घटनाहरु दिनानुदिन बढदै गइरहेका छन।
लागू पदार्थको सेबन : हाम्रो समाजमा धेरै जसो बलात्कारका घटनाहरु लागू प्रदार्थको सेवनका कारणले हुने गरेको देखिन्छ । जाँड रक्सी तथा लागू प्रदार्थ सेबन गरेका बेला ब्यक्तिले बिबेक र चेतना गुमाउन सक्छ र बलात्कारका घटना घटन सक्छन् ।
शारिरिक कारण : शरिरमा सेक्स हर्मन बढदा यौन चाहना बढ्छ । यस्तो अबस्थामा आफुलाई यौन अनुशासनमा राख्न नसक्दा बलात्कारका घटना हुन पुग्छन ।
यी र यस्ता अन्य यौन समस्या ( बिचलन), मानसिक एवं मनोबैज्ञानिक समस्याका कारण यौन अपराध, जबर्जस्ती करणीका घटनाहरु हुन सक्छन ।
बलात्कारको घटनामा संलग्न ब्यक्तिलाई मानसिक रुपमा स्बस्थ ब्यक्ति भन्न सकिँदैन । किन कि मानसिक रुपमा स्बस्थ ब्यक्तिले समाजले स्वीकारेको मात्र ब्यबहार गर्छ । कुनै कार्य गर्नु अगाडि परिमाणको बारेमा सोच्छ । के ठिक के बेठिक छुट्टाउन सक्छ । आफ्नो आबेगलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ । सामाजिक मूल्य मान्यताको सम्मान गर्छ । यी र यस्ता गुण नभएको ब्यक्तिलाइ मानसिक स्बास्थ्यका हिसाबले रोगी भनिन्छ ।
You have reacted on "कस्ता ब्यक्तिले गर्न सक्छन बलात्कार ? बलात्कारक..." A few seconds ago